Miandry Ray aman-dreny • AoRaha
Miandry Ray aman-dreny
Hampihetsiketsika an’ireo sokajina manampahefana samihafa indray izao ireny fanambaràna nataon’ ny vadin’ny Filohan’ny Repoblika, Rajoelina Mialy, momba ny ady amin’ny fanolanana ireny. Nirongatra izaitsiizy ny trangana herisetra ara-pananahana niseho, saika ho tamin’ny faritra maro teto amin’ny Nosy, tato ho ato. Tsy naharenesam-peo firy, indrindra asa mivaingana anefa, ireo manampahefana manana adidy sy andraikitra amin’ny famongorana an’io fomba ratsy tena mamotika fiainana amin’ny maha olombelona io, indrindra fa ny fiainan’ny zaza sy ankizy.
Io fihazohazoana io no tena mahavalalanina eto amin’ity firenena ity. Tsy amin’ny herisetra ihany, fa na amin’ ny tsy fandriampahalemana; na amin’ny fahasalamana sy fitsaboana; na amin’ny fanabeazana sy ny sehatra hafa mahakasika ny andavanandron’ny mponina, dia tahaka ny tsy manana mpiahy mivantana azy ny vahoaka. Mba tombony azo raisiny amin’ ny fisian’ny tambajotra sosialy, toy ny Facebook, ny fivoahan’ireo antso vonjy sy ny fampahafantarana ny trangam-piarahamonina etsy sy eroa.
Soa koa fa misy ny Filoham-pirenena sy ny vadiny: mandamina ny sosialim-bahoaka tamin’ny fihibohana; mizara hazavana maimaim-poana hatrany ananona any; mitoroka ny herisetra mianjady amin’ny vehivavy; miantso ny olona hitoroka an’ireo mpanolana any anaty fiaraha-monina… ary raha izao fidonanam-poana izao, dia mbola hiandry azy mivady foana iretsy ankizy ao anatin’ ny fanjakana fa toa tsy hihalehibe amin’ny sehatra misy azy mihitsy
Mandeha an-jambany ?